Khabiirka Kala Duwan: Maxay Kala Socotaa Korjoogteynta Ganacsiga Saameynta Natiijooyinkaaga SEO
Xirfadlayaasha suuq geynta ah waxay adeegsadaan xeelado kala duwan oo loogu talagalay Search EngineHagaajinta (SEO) habka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sifo caadi ah oo ka mid ah xirfadleyda suuq geynta ee wax ku oolka ah. Waxyaabahan muhiimka ahwaa raadinta falalka ama waxqabadyada - comprar servidor informatico.
Maamulaha Guusha Macaamilka Sare Adeegyada Digital, Lisa Mitchell wuxuu sharxayaa sida loo raadin lahaa waxqabadkaada ganacsiga ee dhinacyada kala duwan ee ka caawinaya inay gaaraan natiijooyin waaragudaha dijitaalka.
Khabiirada suuq-geynta dhijitalka ah waa in ay awoodaan in ay la socdaan ujeedooyinka SEO-ga iyoxeelado. Tusaale ahaan, raadinta waxaa lagu sameyn karaa xiriirrada lagu samayn doono bogga, xayeysiisyada Facebook ee la qaadan doono,iyo kuwa isticmaala oo lala xiriiri doono Twitter. Qorsheynta iyo hirgelinta istaraatiijiyada SEO ma ahan mid ku filan. Khubarada waa inay awoodaanla socoshada dhammaan hawlaha ku lug leh qaadashada istaraatejiyadda suuq-geynta.
Waxaa jira goobo lacag la'aan ah oo loogu talagalay soo jiidashada gaadiidka goobta. Si kastaba ha ahaatee, inta badanSikastaba, suuqyadu waxay ku isticmaalaan lacag go'an. Fahmida kharashaadka SEO-yada waxaa loo abuuraa khabiir SEO ah si loo ilaaliyo miisaaniyaddaee barnaamijka suuq geynta. Falanqaynta kharashyada ayaa sidoo kale awood u leh xirfadlayaasha dhijitaalka ah si loo go'aamiyo soo noqoshada maalgashiga.Kharashka aan saafiga ahayn ee suuq-geynta sayniska ayaa si xun u saameyn kara waxqabadka maaliyadeed ee shirkadda.
Istaraatijiyadaha dijital ah waa inay awoodaan inay gaaraan ujeedooyinka ololaha SEO..Khayraadka ku jira barnaamijka Google AdWords waa inuu abuuraa natiijada la rabo ee gaadiidka dadweynaha ee sarreeya. Xayaysiisyada Twitter waa in aykordhinta tirada macaamiisha iyo dakhliga iibka. Khayraadka ku jira xayaysiinta Instagram waa in ay sidoo kale hagaajiyaan macaamiishagaadiidka. Kormeeridda natiijooyinka ayaa muhiim u ah go'aaminta waxtarnimada qorshaha SEO. Shirkadaha waxay filayaan natiijooyin kala duwansababtoo ah qaybaha kala duwan ee hawlaha. Waxay leeyihiin hadafyo kala duwan. Khabiirka SEO waa in uu diirada saaro sidii loo gaadhi lahaa himilooyinka ay yihiinlagama maarmaan u ah warshadaha ama qaybta dhaqaalaha ee shirkadda.
Soo Celinta Maalgashiga
Guulaha istiraatiijiyada suuq-geynta suuqa oo waxaa go'aaminaya ROI. QaarkoodShirkadaha waxay ku qaataan dhaqaalaha ugu hooseeya habka SEO. Si kastaba ha noqotee, waxay keenaan natiijooyin waxtar leh iyagoo iibinaya adeegyo ama alaab qiimo lehmalaayiin doolar. Shirkadaha qaar ayaa rikoodhka ku riday, inkasta oo ay ku kiciyeen kumanaan doolar oo ololaha suuqgeynta.Dallacaadda xogta suuq-geynta suuq-galka suuq-galinta ayaa u sahli karta khabiirada SEO inay go'aamiyaan haddii ROI uu yahay mid wanaagsan. Dakhliga ka badan waa inuu noqdaawaxaa la abuuraa inta lagu jiro iyo kadib ololaha SEO.
Raadinta iyo Tweak
Guulaha suuq-gareeynta digital-ka waxaa lagu gaaraa iyadoo lala socdo dhammaan dhinacyada SEO-gaistaraatiijiga. Si kastaba ha ahaatee, khabiir SEO ah waa inuu sameeyaa wax ka badan kaliya raadinta natiijooyinka. Isaga ama iyadu waa in ay isku dayaan istaraatiijiyada ololaha digital'kasi joogto ah ula socdaan ujeedada hagaajinta ROI. Waxaa lagugula talinayaa in aad casriyeysid istiraatijiyadaha dijital ah maalin kasta, asbuuc kasta, bil kasta, iyo sanadkiiba.Tweaking waxay awood u siisaa khabiirada suuq-geynta suuqa inay hubiyaan in faa'idooyinka ay ka soo galaan ololaha suuq-geynta ee internetka, ay ka sii darayaancaqabadaha.
Waxaa jira dhowr isbeddel oo suuq-gashiga digital-ka ah ee 2017. Mid kasta oo ka mid ah suuq-geyntaisbedelku wuxuu leeyahay kartida horumarinta waxqabadka ganacsiga adoo kordhinaya dakhliga macaamiisha iyo dakhliga iibka. Khabiirka SEOwaa inuu fahamsan yahay sida loo kormeero oo loo xakameeyo xeeladaha si loo gaaro ROI sare ee shirkadda.